Nagarik Shukrabar - उपन्यासकार सरस्वती प्रतीक्षाको काठमाडौं हेराई : 'काठमाडौं कागजको बाघ जस्तो'
शुक्रबार, १९ माघ २०७४, ११ : ४४ | शुक्रवार
दुवै होइन । स्वान्त सुखाय र बजारमुखी साहित्यभन्दा पर पनि धेरै कुराहरु हुन्छन् । आफ्नै सुखको लागि लेख्ने थिएँ भने जति पनि सजिला विषयमा लेख्न सक्थेँ । किन जोखिम मोलेर यस्तो संवेदनशील विषयमाथि कलम चलाउनुपथ्र्यो र ! बजारमुखी होऊँ भने बिकाउ अन्य विषयहरु पनि थुप्रै थिए, म त्यता जान सक्थेँ । यो पिछडिएको जातिको अस्तित्व र अहंसँग जोडिएको लेखन हो । सांस्कृतिक लेखनको एक हिस्सा हो । त्यसका लागि म स्वयं वादी बस्तीमा गएँ । उनीहरुका अनुभव र अनुभूतिहरुको गहिराइभित्र छिर्ने प्रयास गरेँ ।
ठ्याक्कै यही एउटै टेक्निक हो त कसरी भन्नु ? लेखकले कथा कसरी भन्छ ? कथाको बुनोट कसरी गर्छ भन्ने कुरा लेखकपिच्छे फरकफरक हुन्छ । मैले यसलाई पोयटिक रियालिज्म मार्फत् पस्कने प्रयास गरेकी छु । मेरो आफ्नै कवि व्यक्तित्व उपन्यासमा आओस् तर उपन्यासकार व्यक्तित्वमाथि कवि व्यक्तित्व हावी नहोस् भन्ने कुरामा सचेत भएर काम गरेँ । यसमा फ्ल्यासब्याक पनि छ । वादी जाति माथिको आधिकारिक किताब बनोस् बन्ने ध्येयले इटालिकमा केही नोट किपिङ टेक्निक पनि अपनाएकी छु ।
अब आफ्नो किताब बारेमा आफैँले कसरी भन्ने ? यो त मैले भन्दा पनि पाठकहरुले भन्ने कुरा हो । अन्य थुप्रै किताबहरु जस्तै हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा भने जस्तो हुन्छ वा हुँदैन, त्यो त समयले बताउनेछ । तर लेखकको रुपमा म एक प्रकारले ढुक्क छु । लेख्दै गर्दा भने म सधैं तनाव र बेचैनीमा रहेँ । विषयवस्तु र पात्रहरु नै यस्ता थिए कि तिनले चैनसँग बस्नै दिँदैनथे । म आफैँलाई मनपर्ने किताब लेख्न सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने भय पनि अन्तस्करणमा कतै लुकेर बसेको थियो । लेखिसकेपछि जब पहिलो पाठकको रुपमा आफ्नै पाण्डुलिपि पढेँ– त्यसले अपार सन्तुष्टि दियो । मेरो सन्तुष्टि पाठकहरुको सन्तुष्टि बन्छ कि बन्दैन, त्यो त अब छिटै थाहा लागिहाल्छ ।
न पाठक हुन सजिलो छ, न लेखक हुन नै । पाठकलाई पनि बजारमा १० थरी किताब आउँछन् । पढ्न मन लाग्छ । किन्यो, पढ्यो, राम्रो लागेन भने अर्को किन्यो । तनाव छ नि ! लेखकको वर्षौंको मिहिनेत हुन्छ लेखनमा । बजारमा किताब आएपछि कसैले फ्याट्टै यो झुर छ भन्छन् । कतिले त तारिफ पनि गर्छन् । यी दुवै पचाउन सक्ने खुबी नभएको लेखक छ भने त झन् बर्बादै हुन्छ । त्यसैले दुवै हुन गाह्रो छ ।